Azusa Live Streaming | MyanmarTube
KaungMyat Studio Myawady (Myanmar)
KhineKhine Win says:	November 7, 2015 at 7:09 pm	This past week, I was able to keep this on at office to keep the mind quiet, although I don’t understand Pali much. Thank you for arranging the live streaming.
Myat Pahtan says:	November 6, 2015 at 6:37 pm	အဇူဇာကျောင်း၏ ၁၅-ကြိမ်မြောက် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်းပွဲတော်ကို ဆဋ္ဌမနေ့ အဖြစ် ဆက်လက်ကျင်းပ ပူဇော်နေပါသည်
Phyu Kyaw says:	November 6, 2015 at 5:37 pm	Thank you Sayadaw
Maung Kyaw Myint says:	November 5, 2015 at 5:07 pm	ဆရာတော်များ မိမိတို့ Video အပိုင်းလေးများ ကို download လုပ်လိုပါက သော်၎င်း၊ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အသံမစဲပဋ္ဌာန်း အစအဆုံး download or နာကြား လိုပါက အောက်ပါ Link ကိုနိုပ်ပါ၊ ပဋ္ဌာန်း အစအဆုံး ကို ပဋ္ဌာန်း ပွဲ အပြီး မှ သာ download or နာကြား နိုင် ပါမည်၊ Myanmartube.net မှ ကိုထွန်စိုး
Myat Pahtan says:	November 5, 2015 at 2:52 am	ယနေ့ Nov4ရက်နေ့မှ ပဋ္ဌာန်း စတုတ္ထနေ့အဖြစ် ဆက်လက်ပူဇော်နေပါသည်။
Myat Pahtan says:	November 5, 2015 at 2:52 am	သံဃာတော်များ၏ အလှည့်ကျ အချိန်ဇယားသိလိုက အောက်ပါလင့်ကို ကလစ်ပါ
Khin Tintut says:	November 5, 2015 at 1:08 am	Thank you.I turn on all day today. great. Tha Du Tha Du Tha Du…
George TheinNaing says:	November 4, 2015 at 3:53 am	We keep on opening this LIVE…24/7 as Non-stop broadcasting from AZUSA PBA Temple…until Last-day Nov 8 Sunday (only Onceayear)..NO extra pay to internet…..okay BLESSING to ALL >>>>>>>>>>
Mee Kyi Lee says:	November 4, 2015 at 12:23 am	tha du…tha du…tha du
Shwe Mar Mar says:	November 3, 2015 at 4:52 pm	သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား
Myat Pahtan says:	November 3, 2015 at 3:25 pm	ယနေ့ (Nov 3, 2015) ရက်နေ့မှာ ပဋ္ဌာန်းပွဲတော် တတိယ နေ့အဖြစ် ဆက်လက်ကျင်းပ ပူဇော်နေပါသည်။
Myat Pahtan says:	November 2, 2015 at 8:37 pm	ယနေ့ ပဋ္ဌာန်းပွဲတော် ဒုတိယနေ့ (Nov 2) နေ့အဖြစ် ဆက်လက်ကျင်းပနေပါသည်။
KhineKhine Win says:	October 29, 2015 at 2:07 am	thank you
Yan Wong says:	October 28, 2015 at 11:52 pm	GREAT!!!
Aaron Lynn says:	June 23, 2015 at 3:10 am	No sound
Ma Winmar says:	June 21, 2015 at 2:52 am	ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင် အခုရှာနေတဲ့ပဌာန်းပူဇော်သံကို တွေ့ ပါပြီ Ma Winmar says:	October 28, 2014 at 6:10 pm	recorded live Patthan ကို mp3 files ရှိ၇င်ကောင်းမှာပဲနော် ဘယ်website မှာရှာလို့ ၇နိုင်မလဲဆိုတာသိတဲ့သူရှိ၇င်ပြောပြပါနော် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်
Hazel Leong says:	October 14, 2014 at 3:21 am	Cannot play today.
May Burma says:	October 14, 2014 at 2:36 am	သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဘုရား ။
Ma Winmar says:	October 13, 2014 at 4:21 pm	ဒီပဌာန်းသံအစကနေ အဆုံးအထိအသံတွေကို record လုပ်ထားပြီး website မှာဒေါင်းလုပ် လို့ ၇၇င်ကောင်းမယ်နော် နာချိတဲ့အချိန်နာလို့ ၇တာပေါ့နော် mp3 files နဲ့ ဆိုပူဇော်ချင်တဲ့သူ ပူဇော်လို့ ၇တာပေါ့ ကျေးဇူးတင်ဦးခိုက်ပါတယ်ဆ၇ာ
Mimi Kyi says:	October 9, 2014 at 1:07 am	Live broadcast is poor.
Ti Ti says:	October 8, 2014 at 8:26 pm	(October 12 to 19, 2014) နေ့မျ့ားတွင် တိုက်ရိုက်လွှင့်မည်ဖြစ်၍ အစမ်းလွှင့်နေပါသည်။ Zin Mar Mar Oo says:	October 6, 2014 at 11:22 am	သာဓု သာဓု သာဓု ။ ကျေးဇူးတင်ဦးတင်လိုက်ပါတယ် ဘုရား ။
Alice Huey says:	September 19, 2014 at 12:37 pm	i forgot to listen
Khin Swe says:	September 18, 2014 at 10:29 pm	I can not see nor hear anything now.
9/18/14 6:13 PM
Thant Michelle says:	September 17, 2014 at 10:21 pm	Yesterday I can hear clearly but today, I can’t hear anything:-(
Thant Michelle says:	September 16, 2014 at 10:23 pm	__/__/__/__ Thar Dhu. Thar Dhu. Thar Dhu Par Pha yar..
Azusa 2010 10Th Patthan (168 Hours Audio)